Sida Uu U Burburay Iskudaygii Man City Ee Harry Kane (Warbixin) – Garsoore Sports
Sida Uu U…
Xiddiga Tottenham Harry Kane ayaa xagaagii oo dhan ahaa bartilmaameedka ugu sarreeya ee City si uu u beddelo Sergio Aguero , laakiin hadda wuxuu qirtay inuu ku guuldarreystay inuu ka tago Spurs
Safarkii ugu dheeraa xagaaga ee suuqa kala iibsiga ayaa ugu dambayntii dhammaaday lix maalmood kahor inta aysan daaqaddu kala-iibsiga xirmin, laakiin ma ahayn sida ay Manchester City rajaynaysay.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ee Manchester City ayaa dooneysay Harry Kane halka weeraryahanka Tottenham uu isna sidoo kale doonayay Cityzens. Laakiin kaddib ku dhawaad afar bilood oo la isla dhexmarayay warbaahinta iyo baraha bulshada, kabtanka Ingiriiska ayaa ugu dambeyn aqbalay inaysan taasi dhici doonin.
“Waxaan sii joogi doonaa Tottenham xagaagan waxaana boqolkiiba boqol diiradda saari doonaa sidii aan kooxda uga caawin lahaa inay guul gaarto,” ayuu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka Arbacadii.
Haddaba waxaan warbixintan ku eegi doonnaa waxa keenay inuu burburo iskudaygii Manchester City ay ku dooneeysay Harry Kane.
Dhanka Kane mustaqbalku waa uu u sahlan yahay: waxay tahay inuu dhaliyo goolashii lagu yaqaanay si uu u soo ceshato jaceylka taageerayaasha Spurs, kuwaasoo dareemay niyad jabka uu ka qabo inuu ka tago kooxdii uu ku biiray isagoo 11 jir ah.
Laakiin dhanka City, tallaabada xigta waa mid aan la hubin kaddib markii ay weyday ciyaartoy u ahaa bartilmaameedkooda koowaad xagaagii oo dhan.
Beddelidda Sergio Aguero ayaa had iyo jeer ahayd mudnaanta koowaad kaddib markii gooldhaliyaha ugu goolasha badan taariikhda kooxda uu beeca xorta ah uga tagay Barcelona bishii June kaddib markii uu dhaawac ku maqnaa inta badan xilli ciyaareedkii 2020-21.
City ayaa badbaaday la’aanta Aguero inta badan, waxay ku guuleysatay Premier League waxayna gaartay finalka Champions League, laakiin iyadoo Pep Guardiola uu sheegay inay xamili karaan la’aanta weeraryahan aan la aqoonsaneen haddana wuxuu filayay weeraryahan tayo sare leh inuu yimaado xagaagan.
Weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Haaland ayaa bartilmaameed u ahaa, laakiin kooxda Bundesliga ayaa ku adkeysatay inuusan iib ahayn goor hore, City ayaana weli ku qasbaneyd inay isku daydo inay ka gudubto xiriirka xun ee kala dhexeeya wakiilka Haaland Mino Raiola si ay heshiis u gaaraan balse ma suuragelin.
Dhanka kale, Guardiola ayaa aad ugu qanacsanaa tayada Kane, laakiin inuu ka tago Tottenham mar walba way adkaan doontaa, gaar ahaan marka la eego inay tahay inuu wada xaajood adag la qaato nin ay adagtahay in lala wada xaajoodoo waaa guddoomiyaha Spurs Daniel Levy.
Saamaynta taban ee cudurka faafa ee coronavirus uu ku yeeshay dhaqaalaha kubbadda-cagta ayaa horseeday suuq kala-iibsi oo aan la hubin, laakiin sicirrada ayaa si isdaba joog ah u kordhayay maadaama waqtiga kama dambaysta ah uu soo dhowaaday.
City ayaa bixisay lacagta rikoorka suuqa kala iibsiga ee Ingiriiska oo gaaraya 100 milyan ginni oo ay kusoo iibsadeen kabtankii Aston Villa Jack Grealish, Kane ayaa isna wuxuu had iyo jeer ku kici lahaa wax ka badan saaxiibkiisa Ingiriiska.
Dhanka Kane, wuxuu sameeyay wax walba oo uu awoodo si uu u caddeeyo inuu doonayo inuu baxo.
Wareysi uu ku muujiyay rabitaankiisa ah inuu ku biiro naadi hamigiisa ah bishii May ayaa shidaalka dab ku shiday, halka jahwareerkii ku aaddanaa inuu xilli hore kusoo laabtay tababarka ayaa loo fasiray inay ahayd isku day uu ku qasbi rabay inuu baxo.
Levy, ayaa si kastaba ha ahaatee, mowqifkiisa ku adkeeystay, iyadoo seddex sano ay uga harsan tahay qandaraaskiisa, Kane wuxuu ku qasbanaaday inuu qirto guuldarradii kasoo gaartay riyadiisa ahayd inuu xagaagan ku biiro Man City.
Maadaama uu u jeeday sida ay wax u socdaan, hadda ama hadhoowba waxay ahayd inuu xagaagan Spurs sii joogo, talaabadaas ayuuna si aqiyaarnimo ah u qaatay.
City sidoo kale way ka dhaqaaqi doontaa isag, laakiin waxay heystaan waqti aad u yar marka ay timaado helitaanka weeraryahan tayo leh kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga 31ka Ogoosto.
Maxaa Ka Jira Wararka Sheegaya In Conte Uu Noqonayo Beddelka Arteta Ee Arsenal?